Iinkonzo zoKhuselo lweeaseti kunye noBonelelo
Khusela iimpahla zakho zobuqu kwityala leshishini, iimbambano zeqabane kwishishini, amatyala, izigwebo kunye noqhawulo-mtshato. Sinceda ukuba uqale ishishini, ukhulise ishishini lakho kwaye ukhusele okona kubalulekileyo, ubutyebi obuziqokelelelela empumelelweni yakho.
Sinikezela uluhlu olubanzi lweenkonzo zokukhusela ii-asethi kunye nezithuthi eziqala ngezixhobo zabucala kwaye ukuya kuthi ga kwizicwangciso zokugcina ukhuseleko lweeaseti. Isiqalo sayo nayiphi na isicwangciso sokulondolozwa kobutyebi kukwakha icandelo elisemthethweni lokuzikhusela ubutyebi bakho buqu.
Ubumbano kunye nee-LLCs lolona hlobo luqhelekileyo lokukhuseleka kwezinto kwiimpahla zeshishini ezikhusela ubunini boqoqosho kubanini kumashishini nakumatyala kwishishini - isigqubuthelo sokudibana sisiseko sokuqala sokhuselo lweempahla zabanini bamashishini.
Ubumfihlo bezemali kunye nokuba ngasese nokuba ngumnini kunceda ukunciphisa amathuba okuba kugxilwe kumthetho olambathayo. Sinikezela ngeenkonzo zabucala xa kusenziwa ishishini elitsha njengenkqubo yonyaka kunye nethemba lomhlaba elivumela abanini beepropathi ukuba babize abanini bepropathi ngegama letrasti. Imfihlo yobunini kunye nokukhusela ngokusebenzisa amaziko eenkampani enza ungqimba oluqinileyo lokhuseleko.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zentembelo ezikhusela iimpahla kwinkundla yamatyala. Ipropathi ebandakanywe kwi-trust ngeenjongo zokucwangciswa kwepropathi ikhuselwe kumatyala obucala kumntu oza kuxhamla kwi-trust.
Eyona mithetho inamandla yokukhusela ii-asethi zakho iza ngendlela yezenzo zokuzithemba ezizimeleyo. Amathemba okhuselo lwee-asethi ayenzelwe ngokukodwa ukukhusela iimpahla zikabani kwityala elizayo apho umntu anokuhlawula bobabini kwaye axhamle kwimpahla yexabiso.
Ezi zixhobo zikhethekileyo kwaye ziyafumaneka kulawulo lwasekhaya kunye nolunxweme. Singoochwephesha ekusekeni ezi zithuthi zikhuselayo kunye nezixhobo zomthetho zokhuselo lwakho lweasethi.
I-Asset Protection Trust
Enye yeendlela ezilungileyo zokuzikhusela kwiinkundla zamatyala kukuseta i-asethi yokhuselo lweasethi. Ngelishwa, amatrasti asekhaya awanazo irekhodi ezilungileyo. Iitrasti zaselunxwemeni, kwelinye icala, zinembali yomthetho wokhuselo lweasethi. A Cook Islands zi thembile ngokunjalo neNevis yetrasti zineerekhodi ezimbini ezilungileyo kakhulu.
I-IRAs zihlala zikhululwa okanye zikhululiwe kwinkundla yezomthetho. Nangona kunjalo, ukukhuselwa kwabo kulinganiselwe. Kwaye akukho nto ingako kukukhusela i-IRA kuqhawulo-mtshato ngaphandle kokuba usebenzisa izixhobo ezifanelekileyo zomthetho. In Ukukhusela umthetho we-IRA nguRhulumente, uya kufunda ukuba ungayikhusela njani i-IRA yakho kuqhawulo mtshato okanye kumthetho.
Ubambiso lweTyala eliLingeneyo
Ithemba eliphilayo vs. umyolelo